Tom Holland wuxuu ku laaban doonaa Apple TV + oo uu la socdo "Qolka Camiran" | Waxaan ka socdaa mac
Tom Holland ayaa ku laaban doona Apple TV + oo leh "Qolka Camiran"
Filimka cherry Waxaa hagayey walaalaha Russo waxaana ciyaaray Tom Holland, waxay ka mid ahayd daawadayaasha ugu badan ayaa gaadhay adeegga fiidiyowga ee qulqulka Apple, oo ay weheliso xilli labaad ee Addoon. Laakiin waxay u muuqataa taas ma noqon doonto iskaashiga kaliya ee Holland la leedahay Apple TV +.
Apple ayaa ku dhawaaqday taxane cusub Qolka Camiran, taxane ah oo sahamiya la dagaalanka cudurada maskaxda. Xilli ciyaareedka ugu horreeya wuxuu ka koobnaan doonaa 10 qaybood waxaana dhiirrigelin doona taariikh nololeedka Daniel Key Maskaxda Billy Miligan waxaana la daabacay 1981.
Maskaxda Billy Milligan waxay nagu qaadaysaa sheekada Milligan, qofkii ugu horreeyay ee dambi lagu weeydiiyo sababo laxiriira jirro aqoonsi kala-tag ah khalkhal shakhsiyeed.
Qoraalka ka dambeeya iyo wax soo saarka fulinta Akiva Goldsman, Abaalmarinta Oscar ee Akadeemiyada Hollywood filimka Maskax yaab leh. Akiva sidoo kale waxaa looga yaqaan warshadaha filimada inay tahay la-abuuraha taxanaha Paramount. Star Trek: Picard, Star Trek: Adduunyo cusub oo yaab leh y maradiisa,
Sidoo kale fuliyaha ay soo saartay taxanaha waa Alexandra Milchan oo ka tirsan EMJAG Productions, Arnon Milchan, Yariv Milcha iyo Michael Schaefer oo ka tirsan New Regency. Istuudiyaha Apple iyo New Regency-ka ayaa ah soosaarayaasha taxanahan oo xilligan la joogo Lama shaacin taariikhda la siidaayo.
Abaalmarinta abaalmarinta Oscar oo ka socda Akadeemiyada Hollywood sannadkan, Apple ayaa gaadhay laba magacaabis Diiqa xarragoonaya y Wolfwalkers, ee loogu talagalay filimka filimka ugu fiican.
Ku xiga Abriil 25 daabacaaddii 93aad ee Abaalmarinta Akadeemiyadda ayaa la qaban doonaa. Waxaan si taxaddar leh ugu jiri doonnaa dhacdadan si aan u hubino haddii Apple TV + uu ku guuleysto taallo ugu horreysa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Tom Holland ayaa ku laaban doona Apple TV + oo leh "Qolka Camiran"
Waxaan tijaabinay aaladda bilowga ah ee tadoº V3 + Smart Thermostat
Hadda waxaad ka ciyaari kartaa Flappy Bird daaqada ogeysiiska macOS